TC TG HDL-C LDL-C - Dhiig Barar Dheecaan Xawaare Ah Kit-Barta Tijaabada Daryeelka-Sinocare
TC TG HDL-C LDL-C - Dhiig Bipid Kit Reagent Kit
[emailka waa la ilaaliyay] Qalabka Dhiigga Dhiigga Dhiigga (TC / TG ​​/ HDL-C / LDL-C) waxaa loogu talagalay in tiro ahaan lagu ogaado afar nooc oo dhiig dufan ah (wadarta guud ee kolestaroolka TC, triglyceride TG, cufnaanta sare ee lipoprotein kolestaroolka HDL-C, kolestaroolka lipoprotein-ka hooseeya) LDL-C) ee ku jirta dhiiga aadanaha. Caafimaad ahaan, waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii gargaar baarista cudurka 'hypercholesterolemia', 'hypertriglyceridemia', cudurka wadnaha iyo xididdada dhiigga 'atherosclerosis'.
Wadarta kolestaroolka (TC) waa tilmaame caafimaad oo muhiim ah. Heerka sare ee TC wuxuu u horseedi karaa atherosclerosis, xinjirowga maskaxda, sonkorowga, cudurada wadnaha, cudurada beerka iyo biliary system, iwm.
Triglyceride (TG) maahan oo keliya saamiga TC, heerka dufanka jirka iyo gulukooska dhiigga, laakiin sidoo kale waxay si dhow ula xiriirtaa buurnida. Heerka sare TG wuxuu u horseedi karaa hyperlipidemia. Sare u qaadista TG waxay la xiriirtaa cudurada sida atherosclerosis. Sidaa darteed, ogaanshaha TG waxay muhiimad weyn u leedahay ka hortagga iyo ogaanshaha cudurka macaanka, nephropathy, xiidmaha xiidmaha iyo cudurrada kale ee endocrine ee la xiriira dheef-shiid kiimikaadka.
Cufnaanta sare ee lipoprotein kolestaroolka (HDL-C) waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta hannaanka isu-socodka gaadiidka kolestaroolka, anti-oksaydhka, antithrombotic, anti-bararka, iyo saamaynta waxqabadka xididdada xididdada dhiigga, oo dhammaantood saamayn togan ku leh ka-hortagga cudurka wadnaha. Sida tilmaame muhiim ah oo loogu talagalay kormeerka heerka dufanka dhiigga, HDL-C wuxuu leeyahay macno gaar ah xulashada daroogada iyo qiyaasta saadaalinta daaweynta cudurka wadnaha iyo daaweynta atherosclerosis.
Kolestaroolka-cufnaanta-hooseeya (LDL-C) waxaa sidoo kale loo yaqaannaa cunsurrada atherogenic. LDL-C waxay ka tarjumaysaa heerka hoose ee cufnaanta lipoprotein kolestaroolka, saamiga sare ee ka sarreeya TC, halista ugu badan ee ay tahay inuu ku dhaco atherosclerosis. Ogaanshaha saxda ah ee LDL-C waa mid aad muhiim ugu ah ka hortagga marxaladda hore, ogaanshaha, daaweynta iyo u kuurgalida saameynta daaweynta ee cudurka wadnaha. LDL-C waa aasaaska ugu muhiimsan ee lagu hagayo isticmaalka daroogada ee bukaanka 'hypercholesterolemia'.
FG: 0.3 ~ 11.3 mmol / L